Valan-javaboahary ao Tsimbazaza : Fananam-pirenena sy fanaovam-pikarohana ka tsy amidy
MH 09:34:00 Actualité
Tsy namidy ary tsy amidy amin’iza n’iza ny Valan-javaboahary eny Tsimbazaza, vaovao tsy marina iniana aparitaka andotoana ny mpitantana izany, hoy ny tale Borome Ramaromilanto. Harem-pirenena sady toeram-pikarohana anisan’ireo foibem-pikarohana miisa 900 eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izy io. Noho izany toerana tsy ho azo amidy amin’olon-tsotra na mpandraharaha na iza na iza mihitsy. Misy milaza mantsy fa namidy tamin’ny Sinoa ny ampahan-toerana ao Tsimbazaza hanamboarana trano famakiam-boky, fotodrafitrasa fanaovana fanatanjahantena sy ny sisa.
Nilaza kosa nefa ny tale mpitantana fa raha misy manana tetikasa hanatsaràna na hampandroso ity valanjavaboahary ity dia afaka maneho tetikasa mazava izay tsy maintsy mandalo ao amin’ny filan-kevim-pitantanana ary ny ministera roa miahy azy. Ny Japoney ohatra dia efa tonga nifampiresaka tamin’ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny volana desambra 2016 fa hitady ny fomba hanatsaràna sy hampandrosoana na lafiny biby sy ny zava-maniry na ny toerana fitazonana azy ireo. Fa hatreto aloha mbola tsy hita ny vokatr’izay fifanaraham-piaraha-miasa izay.
Karakaraina mba ho tsara kokoa
Midadasika ity valan-java-boahary ity (23ha) ary izay resaka tontolo iainana sy ny fikarohana mifanaraka amin’izay dia iandraiketany avokoa. Misy mpiasa 194 ao ka mpiasam-panjakana ny 107 ary mpiasa an-tselika ny 87. Misy amin’ireo no mpanao zaridaina, mpanome endrika ny toerana (paysagiste) ary koa ny mpikarakara sy mpitsabo biby ary ny mpandinika manokana momba ny sakafo tokony homena ny biby tsirairay. Ankoatran’izay misy ny mpanabe sy mpandray ireo olona mpitsidika ary ny mpampita vaovao sy ny maro hafa. Na izany na tsy izany tena mila fikarakaràna mihitsy ity valanjavaboahary ity mba ho toerana hanitona ny mpitsidika na Malagasy na vahiny ary mba ho reharehan’ny firenena ny fisiany. Toy ireny valanjavaboahary any ivelany ireny.
Ny biby sy ny zava-maniry dia ahitana karazany ary voakarakara, ny kolon-tsaina malagasy manerana ny Nosy koa dia hita taratra fa ilay toerana amin’ny maha fialamboly sy ny fahafinaretana azy dia tsy manintona satria tsy ampy fikarakarana. Any ivelany izany valanjavaboahary izany dia toerana mahasarika olona ny mizaha azy. Ny eto amintsika dia be zavatra tsy ampy : ny bozaka, ny seza fipetrapetrahana efa mihasimba, ny lalan-kely mitondra eny amin’ny toerana misy ny biby…. Raha fehezina dia mila fikarakarana misimisy kokoa.